Chelsea Oo £125 Milyan Ku Iibsanaysa Saddex Ciyaartoy | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Chelsea Oo £125 Milyan Ku Iibsanaysa Saddex Ciyaartoy
Published on July 5, 2017 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(05-07-2017) Chelsea ayaa ku dhow inay dhamaystirtay heshiis ay la gelayso saddex ciyaartoy oo ay kaga baxayso lacag dhan £125million, kuwaas oo kala ah Tiemoue Bakayoko, Antonio Rudiger iyo Alex Sandro.
Chelsea ayaa la wariyey inay qodobbadii ugu dambeeyey ee dhamaystirka Bakayoko ku jirto, kaas oo ay u diyaarisay inay Monaco kaga soo qaadato lacag dhan £35m, hase yeeshee, waxa kale oo mar la iman doona Stamford Bridge difaaca madow ee Rudiger oo ay kooxda Roma u ogolaatay inay wada xaajood la geli karto, isla markaana ay bixiso lacag £30 milyan ah. Waxa intaas raaca difaaca bidix ee Juventus ee Sandro oo £60milyan wax ka yar ay kooxdiisu diiday inay kaga iibiso, laakiin Chelsea ay go’aansatay inay u hurto lacagtaas. Difaacan bidix ee reer Brazil, haddii ay Chelsea ku iibsato lacagtaas badan, waxa uu noqonayaa ciyaartoyga ugu qaalisan ee kooxdaas soo mara abid, waxaanu kala wareegayaa oo rikoodhkaas haystay Fernando Torres oo ay Liverpool kaga soo qaadatay £50milyan sannadkii 2011.
Chelsea waxay dhinaca kale xaqiijisay oo ay warbaahinta usoo bandhigtay saxeexeedii ugu horreeyey oo ah goolhayihii hore ee Man City ee Willy Caballero.
Chelsea waxay bishii hore suuqa ka heshay £62 milyan, kaddib markii ay iibisay Juan Cuadrado oo amaahdii uu kula joogay Juventus laga dhigay rasmi, goolhaye Asmir Begovic, Christian Atsu, Bertrand Traore iyo Nathan Ake.